Akwụkwọ Akụkọ - MGBE ỌD CDITY KWES→R→ → Small Urban Architecture ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Egwuregwu egwuregwu nke oge a na-enye ohere maka enweghị mgbochi na nchekwa dị egwu n'èzí ọ bụghị naanị maka ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile, kamakwa ndị na-eto eto. Gba egwu na swings na ngwaọrụ niile etinye na ebe egwuregwu, ọkachasị mgbe a na-eme ya n'etiti ndị enyi, dị mma ...
Ugbu a, ngwá ụlọ dị n'okporo ámá gụnyekwara ihe mkpuchi osisi. Enwere ike ịme ihe ndị a na-arụ ọrụ ma na-achọ mma n'ọtụtụ ngwa. Osisi ndị dị na mbara igwe bụ nkwa nke ahụike nke ndị bi na ya, izu ike yana obi ụtọ maka ndị na-anọ na gburugburu ahịhịa. ...
A pụrụ iji sistemu eji eme ihe na-agbakọ n'ọhịa ahihia. Ugbu a, mgbe anyị na-atụle ụzọ dị mma isi na-ekpochasị ọnụ ụlọ, a na-eburu n'uche ụdị edozi ahụ site n'aka ndị ọrụ ahụike ...
Inlọ disinfection / ọdụ nhicha aka bụ ihe ọhụrụ na onyinye anyị dị ka mmewere nke obere ụlọ. Ọ bụ ihe ngwọta na-eme ka disinfection na mkpofu mkpofu dị mfe. Download katalọgụ na pricelist >> Washingsacha na disinfecting aka bụ ihe dị mkpa na-eme na-enye ohere ...
A na-eji obere ihe owuwu na-emepụta obere ihe owuwu n'ime oghere obodo ma ọ bụ nke dị na ụlọ nke onwe, na-enye otu ọnọdụ aha enyere. Ogidi ihe dị iche iche, oche dị iche iche, oche, bọọdụ, ite osisi, ifuru ahịhịa, igwe kwụ ọtọ, ...
Ọ bụ eziokwu na ọrụ nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ ọrụ na-enweghị onwe ya nke nwere ike iweta ọtụtụ afọ ojuju na uru ihe onwunwe, mana ụzọ ịmalite ịmalite ịrụ ọrụ dịka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ adịghị mfe ma ọ bụ dị mkpụmkpụ. Na mgbakwunye na ọkwa doro anya nke ọmụmụ na ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ, onye na-achọ ụkpụrụ ụlọ ga-enwerịrị ...
Ibe ahihia dị ka akụkụ nke imegharị obodo na-enyere aka mee ka ebe ndị ọha dị ọcha dị ọcha, kpochapụ nsogbu na-efe efe ma na-enye uru gburugburu ebe obibi a pụrụ ịgụta ọnụ site n'iwepụ nsị na nsị. Obodo nwekwara ike belata ọnụahịa nke tipping na ...
Ebe nchekwa bọs
Ezigbo ebe nchekwa bọs bụ akụkụ dị mkpa nke sistemụ obodo ọ bụla na-aga nke ọma n'obodo ukwu. Ihe na-eme ka ọ dị mma bụ Njirimara na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụkwa ọrụ na-egbochi ya. Ọzọkwa, ọ na-enye ọhụụ na mfe nnweta ụgbọ ala, ...
Boardlọ ihe ọmụma esonyerela ihe a kpọrọ mmadụ kemgbe chi malitere
Enwere ike ikwu na ọmụmụ nke ihe iriba-ama na mbadamba ihe ochie dị ka ịdị ndụ mmadụ n’elu ụwa. Ejirila akara dị iche iche nke ihe omuma ihe ọmụma kemgbe mbido ụwa, onye ọ bụla n'ime ha na-emezu ebumnuche ozi nke ọma. Site na nchọta nke ọla na ígwè, mmadụ malitere iji ihe ndị a maka ...
Igwe eji igwe kwụ otu ebe - ụdị na uru
E kwesịrị ịchekwa igwe kwụ otu ebe n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, yabụ rack kwesịrị ekwesị ga-aba uru. Ọ bụ ngwaahịa sara mbara nke na onye ọ bụla ga-ahụ ezigbo igwe kwụ otu ebe maka onwe ya, nke nwere ike ịdị iche kpamkpam na nke a na-ahụ n'oge ọ bụla na oghere ọha. Hụ katalọgụ ngwaahịa ...
Ọ B IFR Design na Akara Akara 2020 maka akara Metalco!
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na Smart BHLS Transoceânica Corridor nke Guto Indio da Costa nwetara otuto IF Design Design 2020 na ụdị Design Design Excelence maka ebe ụgbọ ala na-emekọrịta ihe, nke bụ akụkụ nke ọrụ SMART CITY. Hụ katalọgụ ngwaahịa dị n'ịntanetị >> ma ọ bụ ...
Onye na-ese workslọ na-arụ ọrụ na atụmatụ na atụmatụ nke ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu Ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na-enwe ike nyochaa echiche ma ọ bụ echiche nke ndị ahịa ha ma mepụta usoro iwu ihe owuwu pụrụ iche dabere na ha. Ọrụ nke onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nwere ike ịdị iche iche: ụfọdụ na-ahụ maka ichebe ụlọ nke…
Ime obodo mepere emepe - kedu ihe ọ bụ?
Taa, atụmatụ ime obodo bụ otu n'ime sayensi kachasị mkpa mgbe ị tụlere etu oke akụkụ ụwa bi ugbua n'obodo ukwu na gburugburu. N’afọ 1800, ihe karịrị pasent 2 nke ndị bi n’ụwa bi n’obodo. Ka ọ na-erule 1950, ọnụ ọgụgụ ahụ arịala pasent 30. Ma ugbu a, ...
Iwu iwu owuwu
Iwu Iwu Ewuwu bụ ihe ana - edobe ma kọwaa ihe omume n'ọhịa, imewe ihe, ịkwatu na ilekọta ụlọ. Usoro ọ bụla nke iwu ụlọ, site na nhazi ya ruo na mmecha, chọrọ ịkwanyere iwu iwu ụlọ. Iwu owuwu na obere ụlọ dịka iwu si dị…
Ogwe osisi ubi na akụrụngwa ha - nke kacha mma?
Ekwesiri iji nlezianya mee nhazi nke ubi a. Agbanyeghị, ọbụlagodi mgbe onye ọrụ ahụ enweghị nnukwu ogige ọ chọrọ, mana naanị obere ogige, ma ọ bụ ọbụna mbara ihu ma ọ bụ mbara ala, ọ nwekwara ike ịmepụta mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndabere ya ga-abụ ite n'ubi, nke…
Nsu a ga - adị mma ma sie ike dịka ogige nsu nke na - akwado ya. N'agbanyeghị ụdị ihe a ga-eme ha, ọ bara uru ịmara uru, ọghọm ya na ojiji nke oghere ngere nke ejiri osisi, ígwè, ihe mgbochi ogige na galvanized ...
Ihe mgbochi akwa n'okporo ámá nke oge a dịka ihe eji arụ ọrụ n’obodo
A na-akpọ mkpofu ahịhịa, ndị a hụrụ n'okporo ụzọ, na nkwụsị, n'ogige ntụrụndụ obodo, ama egwuregwu, n'aja ájá, n'ubi na n'ámá obodo, ebe a na-akpọ mkpofu ahịhịa n'okporo ámá, ebe a na-awụ n'okporo ámá, ebe a na-ekpofu ahịhịa obodo ma ọ bụ mkpọ obodo. Hụ katalọgụ ngwaahịa dị n'ịntanetị ...
Ogige, ogige na bench dị
Ogige ntụrụndụ bụ ihe dị oké mkpa nke arịa ụlọ n'okporo ámá. Site na echiche nke ọrụ ịba uru, a na-eji ha maka ịnọdụ ala, mana na-eburu n'uche atụmatụ gbasara ohere gbasara mbara igwe, ha bụ arịa ụlọ ndị mepere emepe. A na-etinye oche, ogige, n'ubi, ubi, n'okporo ámá na nkwụsị obodo na oche. Lee katalọgụ ...
Obere ụlọ ime obodo
Ngwongwo okporo ụzọ bu otu obere ulo nke na-emetụta oke banyere ndi oru ya. Obu site na iji ihe ndi ahutara na ngwa ihe eji emeputa ihe, ndi etolite etolite etolite, agwa na karia, a gh…